मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी बढाउनुहोस् रोग प्रतिरोधी क्षमता – KhojPatrika
मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ ? यसरी बढाउनुहोस् रोग प्रतिरोधी क्षमता
खोज पत्रिका शुक्रबार, २०७८ असार २५, ११ :२४ बजे
काठमाडौं । कोरोनाले विश्वभर नै ठूलो मानविय क्षति गराएको छ । महामारी रोकथामका लागि भन्दै गरिएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्र समेत तहसनहस बनेको छ । यो विश्वव्याधिबाट कतिले ज्यान गुमाए, कतिले परिवार । कतिले शारीरिक पीडा झेले त कतिले मानसिक तनाव । कुनैपनि संक्रामक रोगबाट बच्न भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्छ । शारीरिक सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ । पोषिलो र सन्तुलित खानपान गर्नुपर्छ । र, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने पाठ भने कोरोनाले धेरैलाई सिकाएको छ ।
ट्याग : #कोरोना, #रोग प्रतिरोधी क्षमता